Garka Oo La Deysto Waxaa Laga Helaa 7-daan Faaido - Daryeel Magazine
Garka Oo La Deysto Waxaa Laga Helaa 7-daan Faaido
Garku waa haybada iyo quruxda raga, waana astaanta raga muslimiinta. Laakin waliga ma maqashay faaidoynka caafimadeed u garku leeyahay? Hadaba waxaan halkaan kuugu haynaaa faaidooyinkiisa caafimaad:
-Wuxu ka hor tagaa kanserka (cancer) ku dhaca haraga: daraasad ay sameeyen cilmi baarayaashu ayaa sheegtay inu gadhku caabiyo 95% (boqolkiiba shan iyo sagaashan) falaarta loo yiqaano UV rays ee ka timaada cadceeda oo sabab u noqota skin cancer-ka.
-Wuxu yareeya assmada iyo alergyga (asthma and allergy): garku wuxu ku noqon kara filter hawada sifeenaya dhaska iyo wixi la mid ah kaa qabanaya hadaad tahay qof xasaasiyad ka qaba dhaska ama leh assma. Sida timaha sanka ku yaala oo kale ayu u shaqaynaya.
-Hore uma gaboobaysid: falaadhaha cadceeda aya sabab u ah gaboojaha. Markaad garka la baxdid waxaad ka hor tagaysa falaari wajiga kaaga dhici lahayd. Garka markaad la baxdid waxaad u eekanaysa nin wayn laakin waxa xaqiiq ah inaanu wajigaagu hore u coorcoorayn.
-Dhaxanta ayu ka hor tagaa: inkasto aanay jirin dhaxan badan marka la joogo Africa laakin waxa dhab ah inu garku dhaxamaha ka hor tago siday dhogorta xawayanku uga hor tagto dhaxamaha.
-Infections-ka ayu ka hor tagyaa: infections-ku badana waxay ka imaadan marka garka la xiirayo ee shave-ta la isticmaalayo. Wajigaaga ayaa yeelanaya finan iyo dhibaatoyn markaad inbadan gadhka iska xiirtid.
-Wajigaaga ayu ka ilaalinaya qalaylka: wajigaagu arki maayo dabaylo iyo dhibatoyn kale, u baahan maysid inaad wajiga marisid kreem (cream) iyo wax kaleba.
-Intaa aad garka leedahay ajar ayaa kugu socda: nabigii Ilaahay ayaa ina faray inaan garka la baxno. Qodobadan sare waa qodobo ay gaalado maanta cadaysteen, laakin Ilaahay aya og xikmada ku jirta garka.
7-daan Waxyaabood Iska Ilaali Cuntada Kadib Qof kasta Waxaa Heysa Dhibaato U Gaar Ah